Ha ku Ciyaarina Caruurtiina – Bogga sheekooyinka
Ha ku Ciyaarina Caruurtiina
Aflagaadadu way ka xuntahay in la dilo caruurta, waxay qalbigooda ku reebtaa nabar aan waligiis ka go aynin. Waxaa lagu ogaaday baaritaano badan oo lasameyey in Caruurta loo koriyo sida silica ah islamarkaana ay koriyaan waalid ay dareemayaan caruurtu in aysan qiimanaynin.
Ha ku ciyaarina caruurtiina! Waxaan ku bilaabaynaa magaca Allah salaana korkiisa ha ahaato rasuulkiisa;
Kadib markii aan u fiirsaday sida ay Soomaali badan ula dhaqmaan caruurtooda iyo sida ay u koriyaanba waxaa ii soo baxday waxaayaalo badan oo dhibaatooyin ah oo umadeena ka haysata xaga dhaqanka. Umadeena inta badan waxay asal ahaan ka soo jeedaan dhulka naxariista daran ee baadiyaha ah, dhaqankana ad-adayga ku dhisan ee Reer Miyiga ayaa weli ku dambeeya Somalida, xitaa kuwa daggan magaalooyinka iyo dibadahaba. Waxaa ka mida dhaqankaas in aanu qofku ka gabban in uu aflagaadeeyo, caruutiisa, lammaanihiisa iyo dadka ay wada hadlayaan. Afxumada iyo hadalka oo la isku xumeeyo ayaa waxaa ka dhasha xumaan iyo nacayb inta badan dhex marta dadka wada nool ama is-dhalay. Hadii aan u soo laabano caruurta, Soomaalidu waxay ula dhaqmaan caruurtooda sidii wax aan qiimaba lahayn iyaga oo mar kastaba ku aflagaadeeya dadka kale hortooda, laakiin ma ahan dadka oo dhan waa dad dhif ah.
Waxaan mararka qaar booqdaa reer ama waxaan la kulmaa qof Somaliya oo ay curuurtiisu la joogaan, markii ay caruurtaasi wax aad u yar oo khalad ah sameeyaan waxaa inbadan dhacda in waalidkood si xun oo xad dhaaf ah ay u aflagaadeeyaan. Aflagaadadu way ka xuntahay in la dilo caruurta, waxay qalbigooda ku reebtaa nabar aan waligiis bogsoonaynin. Waxaa lagu ogaaday baritaano badan oo la sameyey in caruurta loo koriyo sida silica ah islamarkaana ay koriyaan waalid ay dareemayaan caruurtu in aysan qiimaynin in ay caruurtaasi soo baxaan kuwo dhinaca maskaxda ka jiran oo qaba cuqdad hoosaad aan waligeed bogsoonaynin. Arintaasina waxay mararka qaarkood keentaa in ay noqdaan dad sameeya falal aan caadi ahayn sida, dil, tuugaysi, isticmaalka maanduuriyayaasha, kufsi iyo waxyaabo kale oo ansha xuma ah.
Waxaa lagu sheegay sababta keenaysa waxyaalahaas in ay tahay in cunuga hadii marka uu yaryahay la qiimo tiro oo ay waalidkiisu markay u xanaaqaanba ay ku dhahaan “nacas baad tahay” “wax aad tahay lama arko” “waligaa wax ma noqon doontid” iyo waxii la mida oo qiima tiris ah in ay ilmaha yar maskixiyan uga dhaadhacayso in uu yahay qof nacasa oo aan qiimabadan lahayn. Hadii uu qufku isu arko in aanu qiima lahayn ama uu naftiisa nacana waxaa dhacda in aanu ka xishoonin waxyaalah anshax xumada ah ee ay dadka caadiga ay ka xishoodaan. Waxaa intaas dheera dhinaca tabarta oo ay aflagaadada iyo qaab darrada waalidku raad wayn ku leedahay.